Ndịàmà Jehova Enweghị Ọlịla | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Ha Chọtara Eziokwu
Nwanna Nwaanyị aha ya bụ Juana Ventura malitere ịmụ Baịbụl mgbe a machiri anyị iwu ikwusa ozi ọma. E mere ya baptizim n’afọ 1960, n’Osimiri a na-akpọ Ọzama. E nwere ụbọchị otu pastọ chọọchị dị na Santo Domingo chọrọ ime ka a tụọ ya mkpọrọ n’ihi na pastọ ahụ kwuru na ọ na-akpọrọ ndị òtù ya. Pastọ a gwara ya bịa na chọọchị ya ka ha jụọ ya ajụjụ banyere ihe ndị o kweere ugbu a. O bu n’obi ime ka ndị chọọchị ya mara na Ndịàmà Jehova bụ ndị ụgha, nakwa ka ya mebie aha Juana.
Mgbe Juana gara, pastọ ahụ jụrụ ya, sị: “Gịnị mere unu anaghị atụ vootu? Gịnị mere unu anaghị aga agha? Gịnị mere unu ji aza Ndịàmà Jehova?” Juana sịrị: “Ka m ji Baịbụl na-aza ajụjụ nke ọ bụla, ndị chọọchị ya niile sapere Baịbụl ha ma soro gụọ ebe ndị ahụ. Ihe ha gụrụ juru ha anya, meekwa ka ọtụtụ n’ime ha mata na ha achọtala okpukpe na-akụzi eziokwu. Ha niile malitere ịmụ Baịbụl. Mmadụ iri abụọ na ise n’ime ha mechakwara nyefee Jehova onwe ha.” Ihe a merenụ mere ka ozi ọma biri ọkụ na Santo Domingo.
Ndịàmà Jehova Enweghị Ọlịla n’Obodo A
Ọnwụ Trujillo kpara ọchịchị mba Dọminikan Ripọblik aka ọjọọ. Akwụkwọ Mgbaafọ nke 1963, sịrị: ‘Ndị agha nọchichara n’okporo ụzọ, ọtụtụ ndị bidokwara ịfanye aka n’ụkwụ. Tigbuo zọgbuo jukwara ebe niile.’ N’agbanyeghị ihe ndị a, ụmụnna anyị akwụsịghị ikwusa ozi ọma na ịmụrụ ndị mmadụ Baịbụl. Mgbe afọ ije ozi 1963 gwụrụ, ndị nkwusa e nwere na Dọminikan Ripọblik dịzi otu puku na otu narị na iri ise na ise.
N’afọ 1962, Nwanna Nathan Knorr si n’isi ụlọ ọrụ anyị bịa Dọminikan Ripọblik. O kwuru na a ga-azụta ala ebe a ga-arụ alaka ụlọ ọrụ ka buo ibu ka e nwee ike ịna-elekọta ozi ọma a na-ekwusa n’ọtụtụ ebe nke ọma. Mgbe a zụrụ ala ahụ, a rụrụ ụlọ elu okpukpu abụọ na Ụlọ Nzukọ Alaeze na ya. E nyefere Jehova alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ a na Satọdee, abalị iri na abụọ n’ọnwa Ọktoba, afọ 1963. Ọ bụ Nwanna Frederick Franz, si n’isi ụlọ ọrụ anyị, kwuru okwu e ji nyefee ya Jehova. Ihe ndị a mere ka o doo anya na Ndịàmà Jehova enweghị ọlịla na Dọminikan Ripọblik. Obere oge e nyefechara Jehova alaka ụlọ ọrụ a, e si Kuba zite Nwanna Harry Duffield na nwunye ya Paquita ka ha bịa jewe ozi na Dọminikan Ripọblik. Ha bụ ndị ozi ala ọzọ ikpeazụ gọọmenti Kuba chụpụrụ na Kuba.
Anyị Mụbara n’Agbanyeghị Ọgba Aghara
N’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa Eprel, afọ 1965, ọgba aghara kpụ ọkụ n’ọnụ malitere na Dọminikan Ripọblik. N’oge ahụ, ọtụtụ ndị batara n’ọgbakọ. N’ihe dị ka afọ 1970, e nwere ndị nkwusa dị puku atọ, narị atọ na iri asaa na asatọ, nweekwa ọgbakọ iri isii na atọ. Ihe karịrị ọkara n’ime ha batara n’ọgbakọ n’agbata afọ 1965 na afọ 1970. Akwụkwọ Mgbaafọ nke 1972 kwuru, sị: “Ndị na-arụ ọrụ dị iche iche batara n’ọgbakọ. Ma ndị na-emezi ụgbọala, ma ndị ọrụ ugbo, ma ndị ọkwọ ụgbọala, ma ndị na-apịazi ego. Ndị ọzọ bụ ndị na-arụ ụlọ, ndị kapịnta, ndị ọkàiwu, ndị dọkịta ezé, nakwa ndị bụbu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ha niile batara n’ọgbakọ n’ihi na ha hụrụ Jehova n’anya, jirikwa eziokwu ha mụtara kpọrọ ihe.”